China Knitting Machine Mazino Bhandi Manufacture uye Fekitari |Morton Machinery
Kuruka Machine Mazino Bhandi
Iwe unotarisa kune yakakwira simba rekuruka muchina mazino bhandi?
Ipapo iwe wauya kunzvimbo chaiyo.
Unogona kuwana simba repamusoro & rinopfekeka bhandi remuchina wekuruka pano.
Exwork Mutengo:USD 2-3.5 pamamita
Min Order Quantity: 10 metres
Kugovera Mano: 35000 pcs pagore
1.Excellent quality mabhandi nokuda denderedzwa knitting muchina.
2.No ruzha, anti-satitic, mafuta anopikisa, kupisa-kupikisa.
3.Higher Simba rinokosha bhandi kuti textile denderedzwa knitting muchina.
Morton timing bhandi uchishandisa yakasarudzika seamless loop bhandi tekinoroji, iyo yakakwirira-yakasimba Kevlar musimboti ine yakasimba tensile simba, yakakwira kuneta kuramba coefficient uye hapana chinotambanudzira chiitiko.
Zvese zvinotengeswa kunze kwenyika polyurethane mbishi zvinhu zvinosarudzwa kuti ive nechokwadi chekupfeka kwakakwira kwebhandi, ruzha rwakaderera uye gadziriso-isina.
Morton Zino bhandi rine yakakwirira anti-kupfeka kugona, yakakwirira-kumhanya kushanda kugadzikana, uye hupenyu hwakareba.Yakakodzera kutenderera kuruka michina muindasitiri yemachira, indasitiri yemapepa, uye indasitiri yechikafu.Chigadzirwa chacho chichiri kuchengetedza simba rakanaka rekushanda mukutakura kwekutakura.Inotsigira mhete yekubatanidza uye inogona kubatanidzwa mune chero hurefu.
KUSHANDA ZVINHU CHEKUBVISA NGUVA:
Iyo nguva yebhandi dhiraivha inoumbwa nebhandi risingaperi rine mazino emukati mukati memukati peripheral pamusoro uye pulley ine mazino anoenderana.Panguva yekushanda, mazino ebhanhire mesh ane zino groove yepulley kutumira kufamba uye simba.Rudzi rutsva rwebhandi dhiraivha ine zvakanakira kutapurirana uye cheni drive gear transmission.
Chengetedzo yekuisa uye kushandiswa kwebhandi renguva uye vhiri renguva:
Deredza kureba kwepakati pepulley.Kana pane tensioner, inofanira kusunungurwa kutanga, uye wozogadzirisa nzvimbo yepakati mushure mekuisa bhanhire.Nokuda kwekufambisa nepakati pepakati kureba, pulley inofanira kubviswa kutanga, uye ipapo bhanhire rinoiswa papulley, uye ipapo pulley inosungirirwa pane shaft kuti igadzirise.
Zvakapfuura: Knitting Machine Storage Feeder
Zvinotevera: Lubrication System
China Zvakanakisa Circular Knitting Machine Zvikamu
China Circular Knitting Machine Zvikamu
Circular Kniting Machine Mazino Belt Manufacture
Circular Knitting Machine Mazino Bhandi
Circular Knitting Machine Nguva Yemabhandi
Different Circular Knitting Machine Zvikamu
Kutyaira Bhandi For Kniting Machine
Knitting Machine Zvikamu
Hupenyu Hurefu Bhandi Factory